झापामा प्रहरीकै आँखा अगाडीबाट गुरु तस्करी ! – Anusandhan Online
मुख्य पृष्ठ /News/झापामा प्रहरीकै आँखा अगाडीबाट गुरु तस्करी !
झापा । नेपालको पूर्वी नाका आसपासका बाटो हुँदै भारत तर्फ गोरु तस्करी हुने सधैको अखडानै हो । उता झापाको दक्षिणी क्षेत्रबाट बिना भन्सार अवैध रुपमा सधै जसो गोरु तस्करी हुँदा समेत यसका नियमक निकायहरु मौन बस्ने गरेका छन ।
यो तस्वीर हो । झापाको दक्षिणी भाग राजगढ बजार हुँदै जनता चोक,घेराबारी,भागडुब्बा बाट सिधै भारत सम्म पुग्ने सडक मा देखिएको । हामीले यो तस्वीर भारत प्रवेश नजिकै लिएको हो । सडकमा कयौं चेकपोष्ट तथा प्रहरीको निगरानी केन्द्र पार गर्दै यसरी अवैध रुपमा भारततर्फ गोरु निकासी हुँदा समेत प्रहरी देख्न सकेको छैन ।
यस भित्र प्रसस्त शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ । राजगढ प्रहरीले आफ्नै अगाडीबाट भेनमा गोरु जादा चेक गर्न नसक्नुको कारण के हो ? कतै प्रहरी त मिलेन ? दैनिक जसो ८,१० भेन यसरी नै निकासी हुँने गुनासो आउँदा यस बिषयमा त्यहाँका प्रमुख सही कुमार ढकाल सँग बुझँदा आफु बिदामा रहेको बताए । उनले यस अघि कहीँले काहीँ जाने गरेको तर भन्सार काटेर जाने गरेको बताए । यस बिषयमा आफु बुझने बताए ।
त्यस क्षेत्रमा रहेका फयाज,अजाज,गुण्डी नाम गरेका नाम चलेकै चौपाय तस्करी गर्ने मूख्य भूमिका खेल्ने गरेका छन । तर,उनीहरुको अवैध कृयाकलाप रोक्न प्रहरी खासै चासो देखाएको पाइदैन् ।
कहीँले मध्यरातमा त कहीँले दिउँसै भारतर्फ गोरु भित्र्याइन्छ । तर,नियमक निकाय मौन रहदा तस्करहरुले फाइदा लिइरहेका छन । त्यसो त भारत प्रवेश गरुन् जेल सम्म सशस्त्र प्रहरीको बिओपी पनि रहेको छ । घेराबारी,भागडुब्बा हुँदै भारत तर्फ यसरी गुरु तस्करी हुँदा उनीहरु समेत रमिते बन्ने गरेका छन ।
पुर्व राजा दम्पतीलाई काेराेना